गाडी चल्यो, यात्रु छैनन् | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
गाडी चल्यो, यात्रु छैनन्
Published On : ३ आश्विन २०७७, शनिबार १०:३०
करिब छ महिना बन्द भएर खुलेको यात्रुबाहक सवारी साधनमा यात्रु भने फाट्टफुट्ट मात्रै छन् । सरकारले बिहिबारदेखि लामो दूरीका सवारी साधन चलाउन अनुमति दिएको थियो । अनुमतिपछि गोरखामा पनि डिस्इन्फेक्ट गरेर सवारी साधन संचालन गरियो । यात्रुको खोजीमा गन्तब्यतर्फ गएका साधनको रित्तै देखिन्थे ।
यातायातको टिकट काउन्टर खुलेपनि टिकट काट्नेहरु छैनन् । आधा वर्षसम्म गाडीको स्टेरिङ समाउन नपाएका चालक र सहचालक बिहानैदेखि बसपार्कमा पुगेपनि पनि यात्रु नपाउँदा निराश छन् ।
दरौँदी यातायात सेवा प्रालिका कार्यालय प्रमुख एकराज उपाध्यायले भने ‘काठमाण्डौँ जाने दुई चार जना छन्, अन्य रुटका गाडी रित्तै दौडिएको छ ।’ ग्रामिण भेगका केही रुटमा गाडी चलेको र अधिकांश रुट सडक बिग्रिएका कारण पनि बस चलाउन समस्या भएको उनले बताए । ‘अझै केही दिन गाडी चलाउन समस्या छ’ उनले भने । प्रालिले गोरखाको ३५ देखि ४० वटा कच्ची रुटमा गाडी छुटाउँदै आएको छ ।
पृथ्वीराजार्ग बस संचालक कम्पनी प्रालिका गोरखा स्थित कार्यालय प्रमुख राजन ढुङ्गाना चार पाँच जना यात्रु लिएर पनि गाडी शुक्रवार पोखरा, चितवन, काठमाण्डौँ छुटेको बताए । ‘गाडी चलेको छ, सिधै सेवा सुरु भएको छ भन्ने जानकारी दिन पनि हामीले गाडी छुटाएका छौँ’ उनले भने ।
कोभिड १९ को त्रासका कारण सर्वसाधारण सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्न तयार भईसकेका छैनन् । चाडबाड नजिकिँदै गर्दा सर्वसाधारणको चहलपहल बढ्ने र यातायात साधन राम्रो सँग संचालन हुन अझै केही दिन लाग्ने ब्यवशायी बताउँछन् ।